Iindaba -Iphepha lephepha lendebe lePlastiki leZero lifumene isiqinisekiso seTVV esonakalisiweyo
Ngomhla we-25 kaMeyi, usekela-mongameli omkhulu we-TÜV Rheinland Greater China wakhupha i-DIN CERTCO kunye ne-European Bioplastics Association izatifikethi zemifakelo yesivundisi kwi-APP Sinar Mas Group Iphepha Lemveliso.
Imveliso eqinisekisiweyo yiphepha lendebe elisandula ukwenziwa leZero Plastic® lephepha le-APP Sinar Mas Group. Iqinisekisiwe yi-TÜV Rheinland esekwe kwi-DIN EN13432: 2000-12 kunye ne-ASTMD6400: imigangatho ye-2019-01. Ngokufunyanwa kwesatifikethi esithobekileyo, oko kubonisa ukuba iimveliso zorhwebo zeZero Plastic zikupasile ngokupheleleyo ukuvavanywa kunye nokuqinisekiswa kwemibutho egunyazisayo yasekhaya nakwamanye amazwe (isatifikethi sokuthotywa komgquba, uvavanyo lokhuseleko lwebhayoloji, uvavanyo lwe-POPs fluorine, uvavanyo oluthile lokuhamba, njl. .).
Ngaphantsi kwesithintelo esitsha selizwe kwiiplastikhi kunye nokuvalwa kweplastiki, iikomityi zephepha, iibhegi zephepha, iibhokisi zasemini, njl. Ukuqonda ukusetyenziswa okuphezulu kokubuyiselwa kobutyebi, endaweni yokutsha kunye nokugcwaliswa komhlaba, sisisombululo sokwenyani sokunceda ukungathathi cala kwekhabhoni kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni.
Ukutsalwa kwamaphepha okwenziwa kwale mihla kunye nokwenza iphepha luphawu oluhlaza noluzinzileyo "lomjikelo omkhulu", kunye nokuveliswa, ukusetyenziswa, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona, kunye nokubhalwa kwephepha phantsi kwegama lophawu lweZeroPlast® kwenza "umjikelo omncinci", ukugcina izixa ezikhulu zemithi emhlabeni. Njengenkokeli yehlabathi ekwenzeni kunye nokwenza iphepha, i-APP izimisele ukusebenza kunye ukudala uphuhliso oluzinzileyo lomhlaba kunye nokunceda izizukulwana zethu ezizayo.
Grade Uluhlu lokuthintela ukhuseleko kwindalo esingqongileyo lwe-EPP lwenza umphezulu wephepha ube neepropathi zokuthintela ubushushu kunye nokuvaleka kobushushu. Ayifuni ukuqhubekiswa kokutyabeka kwe-PE. Kufanelekile ukuba zenze ngokuthe ngqo zonke iintlobo zeekomityi zamaphepha, izitya zamaphepha, iibhokisi zasemini, imiphanda yesuphu kunye nokunye ukupakisha ukutya. Izisombululo zokupakisha ezingaphezulu kwendalo kunye nezikhuselekileyo;
② Ayikho iplastiki, akukho arhente ye-fluorescent, enokuphinda isetyenziswe kwakhona (inokuphinda ibuye ngqo), ihlaziyeke (100%), icompostable, ikhuselekile kwaye inobuhlobo kwindalo, ngokuhambelana nophuhliso oluhlaza oluqhelekileyo lwezixhobo zokupakisha;